Dhageyso+Sawiro: Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida 27 aad oo ay maanta dhageystay dacwad loo heysto saddex eedeysane – Walaal24 Newss
March 24, 2018	Off	By walaal24
Maxkamada Dajada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida qeybteeda 27.aad ee gobolka Hiiraan ayaa Maanta dhageystay,iyada oo kaashaneysa Xafiiska Xeer Ilaalinta Gobolka saddex rag ah oo lagu eedeeyay in ay ka tirsanaayeen Al-Shabaab.
Saddexda eedeysane oo lagu kala Magacaabo Cabdullaahi Suldaan oo 22 Jir ah Shariif Xasan Gacal oo 32 jir ah iyo Cabdi Naasir Maxamuud Sheekh Maxamed oo 34 jir ah,kuwaas oo dhamaantood lagu eedeeyey in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab.
Gudoomiyaha Maxkamada Ciidamada Qalabka sida qeybteeda 27aad ee gobolka Hiiraan ayaa shaaciyay dambiyada loo heysto ragaas.
Cabdi Naasir Maxamuud Sheekh Maxamed ayaa lagu soo qabtay kadib howlgal laga sameeyey degmada Afgooye,isaga oo loo heysto in uu masuul ka ahaa Gaari qaraxyo siday oo lagu qabtay Puntland,isaga oo xiriir la’lahaa Kooxda Daacish.
Cabdullaahi Suldaan iyo Shariif Xasan Gacal ayaa iyana loo heystaa in ay ka tirsanaayeen Al-Shabaab,isla markaana dhibaatooyin ay ka geysteen Magaalada Buulo burde, kuwaas oo Maanta dacwadooda la dhageystay.
Gudoomiyaha Maxkamada Ciidamada Qalabka sida qeybteeda 27aad ee gobolka Hiiraan Sheekh cabdul Casiis Cabdullaahi Xasan ayaa sheegay in Dacwada Maanta halkaasi ay ku egtay,isla markaana markale dib loogu soo laaban doono.
Xeer Ilaaliyaha Maxkamada Ciidamada Qalabka sida qeybteeda 27aad ee gobolka Hiiraan Maxamed Cabduqaadir Maxamed.
Halkan hoose ka dhageyso+ Sawiro:-